Local Media - लेले चन्दनपुर सडक १४ दिनदेखि अवरुद्ध,स्थानीयलाई सास्ती,कता होला स्थानीय सरकार ?
लेले चन्दनपुर सडक १४ दिनदेखि अवरुद्ध,स्थानीयलाई सास्ती,कता होला स्थानीय सरकार ?
प्रकाशित समय: सोमवार, १० : २३ बजे श्रावण १९ गते
ललितपुर, लेले चन्दनपुर मोटरबाटोको कतुवन सडकखण्ड विगत १४ दिनदेखि बन्द रहेको छ । अविरल वर्षातका कारण साउन ५ गते राति पहिरो जाँदा उक्त सडकखण्ड अवरुद्ध हुन पुगेको हो । साउन ७ गते महांकाल गाउँपालिकाले पहिरो पन्छाउने कार्य सुरु गरेपनि पहिरो खस्न नरोकिएपछि गाउँपालिकाले पहिरो पन्छाउने कार्य रोक्यो।
लगातार पानी पर्दा उक्त स्थानमा ७० मिटरको हाराहारीमा पहिरोले सडक भत्काएको छ। पहिरोको आकार ठूलो भएकोले पहिरो पन्छाउँदा सडक माथि र मुनि रहेका बस्तीलाई असर गर्ने, ठोट्नेखोला थुनिने जोखिम बढेको छ। वैकल्पिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको उन्युचौर-मध्यमार्गी सडक पनि हिलाम्मे हुँदा सवारी साधन आवत जावतमा सास्ती हुने गरेको सवारीचालक रामबहादुर वाइबाले बताए।
सडक बन्द हुँदा दूध तरकारी ढुवानीमा समस्या बढेको, स्थानीयहरु पहिरो हुँदै यात्रा गर्ने हुँदा मानवीय जोखिम समेत रहेको स्थानीय शिक्षक दिलिप स्याङ्तानले बताए। उनले सडक सुचारु गर्न स्थानीय सरकारले तत्काल पहल सुरु गर्नुपर्ने बताए।
महांकाल गाउँपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र दाहालले पहिरो पन्छाउने र सडक सुचारु गराउने कार्यमा आफू दिनप्रतिदिन लागिपरेको बताए। उनले उक्त स्थानमा अघिल्ला वर्षहरुमा पनि पहिरो खस्ने समस्या भएकाले संघीय सरकारले पहिरो रोकथामका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको तर ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा यो समस्या आएको बताए।
अध्यक्ष दाहालले एउटै काममा दोहोरो खर्च गर्न नसकिने भएकाले गाउँपालिकाले अहिले सो स्थानमा टेन्डर सम्झौता गरेका ठेकेदार कम्पनीलाई काम छिटो सक्न दिनानुदिन दबाब सिर्जना गरेको बताए। उनले सडक तत्काल सुचारु गर्न ठेकेदार कम्पनीले अहिले काम सुरु गरे गाउँपालिकाले सघाउने समेत बताए।
सो स्थानमा काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गरेको र सुर्योदय कन्ट्रक्सनको नाममा टेन्डर स्वीकृत भई सम्झौता समेत भइसकेको छ । तर ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम सुरु नगर्दा गत वर्ष उक्त कार्य सम्पन्न हुन सकेको थिएन। जसका कारण त्यहाँका स्थानीयले जोखिम मोल्नु परेको छ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका डि इ दिनेश पोतेका अनुसार सुर्योदय कन्ट्रक्सनले माघ महिनामा सम्झौता गरेको तर कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण सडक निर्माण रोकिएको बताए। उनले सम्झौताअनुसार काम तत्काल सुरु गर्न कन्ट्रक्सनको नाममा पत्र काटिसकेको बताए।